शेर्पेनी युवतीलाई मन पराएको त्यो क्षण – Rastriyapatrika
rastriyapema | November 24, 2020 | Comments
म सिन्धुलीको भिमानमा रहेको ब्राईट फ्यूचर बोडिङ्ग स्कूलमा टीचिंग गर्थेँ। एक शुक्रवारको कुरा हो, सधैभन्दा अलिक छिटो स्कूलको समय सकेकोले म भिमान बजारतिर लागे मेरो साथीसंग । मेरो साथी मनिष मसंग एकदमै मिल्नु हुन्थ्यो। बजार रोडमा पुगेपछि अलिकती मान्छेहरू थुप्रिएको देखियो, साथीसंग कुरा हाक्दै हामी पनि त्यहाँ पुग्यौ। एक जना शेरपेनी बहिनीले जडीबुटी बेच्दै रहेछ।
साथी र म पनि नजिकिँदै जिस्कीदो हिसापले बोल्न थाल्यौँ। मलाई देखेर ऊ लजाएको जस्तो गरिन। राता राता गाला अनि शेर्पा ड्रेसमा चिटिक्क सजिएकी थिईन उनी! देख्न साथ मैले मन पराएँ उसलाई। मेरो मनमा कुरा खेल्न थाल्यो ” किन यति राम्री युवती भएर पनि यस्तो काम गर्दै हिडेकी होला? म यस्तै सोच्न थालेँ, तर शायद उसको बाध्यता अर्कै थियो होला। मैले बहिनीको घर चाही कहां हो नि? भनेर सोध्दा, उसले मिठो बोलीमा आफू संखुवसभाबाट आएको भनेर बोलेको मिठो बोली अझै मेरो मनमा गुज्रिरहन्छ! एउटा झोलामा जडीबुटीहरू झिक्दै के के भन्दै थिईन उनी! उसको बोलाई शैली पनि भोटे भोटे टाईपको सुनिन्थ्यो तर मान्छे भने फिल्मको नायिका भन्दा पनि सुन्दर! जब ऊ मलाई हेर्दै मुस्कुराईन, त्यो मुस्कानले मेरो जीवनमा होडबाजी मच्चायो।
उसको मुस्कानले मेरो मन छुयो, उसले पनि बेला बेला लजाई लजाई मलाई हेर्थी। मैले मेरो जीवनमा भेट भएको केटीहरूमा सबैभन्दा सुन्दरी केटी नै उसैलाई ठानेँ, हुन पनि त हो, स्वर्गको परी भन्दा कम सुन्दरी भने अवश्य थिईनन् उनी! उसले एकैछिनमा बोल्दाबोल्दै केही औषधिहरू बेचेर झोलाको भारी बोक्दै “अब म जानु पर्छ” भनी हास्दै! मान्छेहरू जमेको ठाँउबाट केही पाईला पर पुगेपछि मैले ‘म तिमीलाई विहे गरेर राख्छु, यतै बसुम’ न’ भनेँ, उसले लजाएर टाउको घोप्टायो! मेरो साथी भने गदगद हास्दै हुनुहुन्थ्यो।शायद उसले पनि मलाई मन पराएको थियो (?) तर प्रस्तुत गरने समय मिलेन। एकै छिनको हेराहेरले मेरो मुटुको धड्कनले अर्कै मोड लिसकेको थियो, तर….. तर नचाहादा नचाहाँदै……. उनी लजाउदै हास्दँ अघि बढीन हामीलाई धेरै पछि पार्दै। मैले उसलाई भिमान बजारको उकालोसम्म हेरिरहेँ, उसले पनि बेला बेला हेर्दै गईन, त्यसपछि त्यो बजारकतै कहिले पनि फेरि उसलाई चाहेर पनि भेट्न सकिनँ। कसैलाई मन पराएको त्यो घटना मेरो जीवनको अविस्मरणीय क्षण बनेर रहिरहयो।।
लेखक: पेमासिंह तामाङ्ग